Madaxweynihii hore ee Suudaan, Cumar al-Bashiir, oo gurigiisa laga helay malaayiin doolar - BBC News Somali
Madaxweynihii hore ee Suudaan, Cumar Xasan al-Bashiir
Dacwad oogaha dalka Suudaan ayaa waxa uu bilaabay baaritaan uu ku sameynayo madaxweynaha xilka laga tuuray ee Cumar Xasan al-Bashiir, kaas oo loo haysto eedo ah inuu si sharci-darra ah lacago isugu kala gudiyay iyo weliba inuu haysto lacago badan oo qalaad.
Lacagtaas ayaa haatan waxaa lagu shubay Bangiga Dhexe ee dalkaasi Sudan.
Mr al-Bashiir ayaa la dhigay xabsi kaddib markii xilka laga qaaday 9 maalmood ka hor kaddib bilooyin ay socdeen dibadbaxyo isaga loogaga soo horjeeday.
Sidoo kale al-Bashiir waxaa laga doondoonayaa Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada ee loo soo gaabiyo ICC, taas oo u haysata eedo ah inuu galay dambiyo dagaal iyo inuu xasuuq gaystay.
Sudan: Xubno dowladdii hore ka tirsanaa oo xabsiga loo taxaabay
Wasiirka Gaashaandhigga ee Suudaan ahna madaxa taliska milatariga ayaa shir jaraa'id oo si weyn loo sugayay goor dhaow ku sheegay in xilka laga qaaday Al-Bashiir isla markaana xabsiga loo taxaabay.
Ninka xuduudunta u ahaa xeeladda FBI-da ee basaasidda burcadda daroogada